Konke mayelana nomuzi wase-Italy we-florence
I-Ponte Vecchio, igalari ye-Uffizi, i-Cathedral, ama-boutiques okunethezeka nokudlela okubizayo ... Konke lokhu kuphathelene neFlorence, idolobha lapho ukuphila nobuhle bukhukhume khona.
Iholide elinde isikhathi eside lifikile! Uzoya kuphi? Uma ungafuni nje ukulala emabhishi asegolide bese uya emaphathini ama-foam, kodwa nokuthi ungayithuthukisa kanjani izwe lakho elingokomoya, khona-ke kudingeka nje uhambe e-Italy! Yimuphi umuzi, ubuza? I-Rome, i-Venice, i-Milan? Cha, Florence, othandekayo wami. Ukuvakashela leli dolobha kanye, ngokuqinisekile uzofuna ukubuyela lapha futhi. Kuphi, njengokungathi akukhona eFlorence, ungakwazi ukucabanga ngobuhle nokuhlakanipha kwabantu okuboniswa ubuciko bokubuciko, umhlaba wonke? Ungabeki, futhi ungafuni ukuthatha ifoni ukubiza opharetha bezokuvakasha kanye namathikithi encwadi ku-Florence? Bese ufunda.
I-Florence iyinhloko-dolobha enhle kakhulu yaseTuscany. Ngokombiko, idolobha lasekelwa nguJulius Caesar ngo-59 BC, elibiza nge-Fiorentz, okusho ukuthi "idolobha lezimbali".
Ngokungafani neminye imizi eminingi yase-Italy, iFlorence inamasonto amaningana, amasonto, iminyuziyamu, imidwebo nemibhoshongo. ULeonardo da Vinci, Michelangelo, Dante, Boccaccio, Galileo, Giotto - zonke lezi zihlakaniphile zazalwa futhi zadalwa lapha, edolobheni lobuciko - uFlorence. I-Tuscany yindawo yokuqala yokuzalwa yolimi lwesiNtaliyane. Into ewukuthi uDante wayengowokuqala wezinkondlo nabalobi abaye bakhetha ukudala umsebenzi wakhe "Comedy Comedy" hhayi ngesiLatini esicashile, kodwa ngesi-Italian esendulo. Ngendlela, i-Florentines iyaziqhenya kakhulu ngokuthi uDante wayehlala edolobheni lakubo. Yiqiniso, njengoba sazi, waxoshwa emzini. Kumele kuqashelwe ukuthi cishe zonke izinto zedolobha zigxilwe ngaphakathi, ngakho ngeke ukwazi ukucabanga konke ubuhle ngesikhathi esisodwa. Udinga nje ukubhuka ihhotela enkabeni yedolobha, futhi njalo lapho uya ekhalini, ungayeki ukujabula, ngoba akukaze kube khona isikhathi esibhekene nawe ngobuhle, njengoba, njengoba kusaziwa, "kuzosindisa umhlaba."
Ukukhangwa okukhulu kweFlorence - iCathhedral kuCathhedral Square, eyakhiwa ngo-1269. Yanikezelwa eSt. Mary del Fiore - umphathi wodolobha. Kuyinto emangalisayo ngobuciko ubuhle kanye nezakhiwo, lapho imisebenzi abaculi ezinkulu Italian bahlangana.
I-Piazza della Signoria ibhekwa njengegceke eliphakathi kwedolobha. Nansi iPalazzo Vecchio, ukwakhiwa okwaqala kusukela ngo-1294 ngokusho komsebenzi we-Arnolfo di Cambio. Manje kulesi sakhiwo nguMasipala waseFlorence.
Igalari ye-Uffizi yakhiwa ngokusho komsebenzi kaGeorge Vasari (1560-1580). Phakathi kobuciko obuvezwe lapha - "Ukudumisa amaMagi" Gentile da Fabiano, "Ukuzalwa kweVenus" no "Spring" nguBotelli, imidwebo kaRafael, Titian, Rubens, Perugio. Ngaphandle kokuvakashela le myuziyamu, awukwazi ukusho ukuthi uvakashele uFlorence. Kunjengezindawo ezingcwele eMecca noma kwa-Israyeli.
Kumele kuthiwa akulula kakhulu ukufika kugalari. Ibhuku lamathikithi ngenyanga, ama-athomu ngaphambili. Kuyacaca ukuthi uyisivakashi, futhi uhambo lwakho oluya e-Italy lunqunyelwe ngemigomo, kodwa njengoba ama-Italiya athi, "Niente da fare!" ("Akukho lutho okumelwe lwenziwe!"). Ukuhleleka kungumyalo, babhalele ithikithi kusengaphambili, yikuphi okungekho eshibhile - ukudlula, futhi uma ungumuntu wezivakashi, nakuba unomphefumulo othukile ukucabangela konke nakho konke, kodwa ngaphandle kwethikithi eliyigugu - ekuphumeni!
Ngokuqondene nazo zonke ezinye izinto ezikhangayo zikaFlorence, ungawavakashela ngaphandle kokuvimbela.
Idolobha lidume ngamapulangwe ayo adumile emhlabeni wonke ePonte Vecchio. Hlobo luni lintombazane engafuni ukushiya khona imali enhle into encane?
Ucabanga ukuthi ukuthengwa okuhle kunokwenzeka kuphela eMilan, inhloko-dolobha yefashini? E-Florence, uzobuyisa ngokuqondile i-wardrobe yakho yonke. Ama-boutiques, izitolo ezithengiswayo, ukudayiswa kwe-crazy, brand top and ezingaziwa - konke lokhu kulindeleke edolobheni ubuhle obungunaphakade.
Gucci. Ucabanga ukuthi kungani sisho igama lomuntu odumile emhlabeni? KwakuseFlorence, ngo-1904, kanye namadodana akhe, wavula isitolo sakhe sokuqala lapha. E-Florence, izitolo eziningi zezimonyo namafutha, lapho uzothola khona imikhiqizo yabakhiqizi base-Italy bekhwalithi ephezulu, kodwa engaziwa kuwe. Qinisekisa ukuthenga. Ubani, njengokungathi akuyona i-Italy, ukuqapha ngokucophelela ukubukeka kwabo futhi wazi ngaphezu kweyodwa iresiphi yobuhle?
Okokugcina, uFlorence, njenganoma yimuphi omunye umuzi e-Italy, udume ngokudla kwawo okudla okumnandi okwejwayelekile wase-Italy. Uzoyithanda ekuboneni kuqala, noma kunalokho, kusukela ekuqaleni kokuqala. Uzozizwa ukhululekile kakhulu, usunambithe isidlo esingokwesiko sase-Italian, uhlale ukhumbule ukuthi amanani ezitolo zokudlela (hhayi nje kuphela kuwo) angakuphonsa phansi ngokushesha. I-Florence ingenye yemizi ebiza kakhulu e-Italy, futhi konke ngoba lapha yiyona inamba enkulu kunazo zonke izivakashi. Yebo, ukuya eFlorence kuzokubiza ngaphezu kohambo oluya eRimini, eTurin noma naseRoma. Kodwa kholwa kimi, kuwufanele.
Eminyakeni embalwa eyedlule, uFlorence wayebizwa ngokuthi idolobha elinamandla kakhulu kulo lonke elase-Italy. Ningikholelwa mina? Lapho ufika, ngokuqinisekile uyozizwa udlame oluvuthayo noluthando lokuphila eFlorence.
UKhisimusi wamaKatolika 2015: uma kugujwa uKhisimusi wamaKatolika, usuku
Amakhowe: mayelana nezinzuzo nokulimala
Ikhalenda lembewu ngoFebhuwari 2017 - Ithebula lamalanga afanelekayo kwabalimi nabalimi bezinyanga zenyanga
Ingozi yezinambuzane zokuphila komuntu
Ulwazi oluwusizo kakhulu ngamaqanda ezinkukhu
Amakhambi omphakathi wokuqinisa izinwele nokukhula
Indlela yokusinda izinkinga ngesikhathi sokusebenza